अधिकांश स्थानमा आंशिकदेखि सामान्य बदली - sailungonline
३ माघ २०७७, शनिबार १२:५६ । काठमाडाैं
न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले आज देशको अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने भएको छ ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरणअनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम ५.० डिग्री र अधिकतम तापक्रम १९.८ डिग्री सेल्सियस रहेको छ । त्यस्तै आज सबैभन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम माइनस ३।४ डिग्री रहेको छ ।
गायिका अञ्जु पन्त विवाह बन्धनमा
हुबहु कपि पेष्टले लोकप्रियता गुमाउछ: उपसभामुख तामाङ
१. हेटौँडामा ट्रकको ठक्करबाट सफारी चालकको मृत्यु
२. धुलिखेल बसपार्क
३. गायिका अञ्जु पन्त विवाह बन्धनमा
४. प्रचण्ड–नेपाल पक्षद्वारा आफ्ना सांसदहरुलाई तत्काल उपत्यका नछाड्न निर्देशन
५. पूर्वाधार समाचार सङ्कलनमा खोजी पत्रकारिता गर्नुपर्ने
६. हुबहु कपि पेष्टले लोकप्रियता गुमाउछ: उपसभामुख तामाङ